सामाजिक सञ्जाल नभएको भए के हुन्थ्यो ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः कार्तिक १२, २०७५ - साप्ताहिक
जीवन सार्‍है रमाइलो हुन्थ्यो । साथीभाइहरूसँग अलि बढी समय बित्थ्यो । चस्माको व्यापार भने अलि कम हुन्थ्यो । सबैको सुत्ने–उठ्ने ठेगान हुन्थ्यो । डिभोर्स, लभ र ब्रेकअप धेरै कम हुन्थे, अनि न साप्ताहिकबाट यस्तो प्रश्न आउँथ्यो न मेरो यस्तो उत्तर हुन्थ्यो ।
सन्जाल नभएको भए यति हत्या–हिंसा हँुदैनथ्यो । यातायात नभएको भए ढाकर बोकिन्थ्यो । नोट र एकको ढ्याक रुमालमा पोको पारेर मासु किनिन्थ्यो । यदि चामल नभएको भए भात खानबाट बन्चित भइन्थ्यो ।
साप्ताहिकको व्यापार फस्टाउँथ्यो ।
हरेक केटाकेटीको विवाह उनीहरूका बाबु–आमाको चाहनाअनुसार हुन्थ्यो ।
सञ्जाल नभएको भए जाल हुन्थ्यो ।
साप्ताहिक बढी बिक्ने थियो कि ?
मानिसहरू भाइरल हुँदैनथे ।
पाख्रिन केटो म
सामुदायिक सन्जाल हुन्थ्यो ।
म त मोबाइलमा मज्जाले गेम भिडियो हेरेर बस्थें ।
एकदमै राम्रो हुन्थ्यो ।
टाइम पास हुँदैनथ्यो भने देशमा केही विकास हुन्थ्यो ।
केटाकेटीहरू मल्टी ट्यालेन्टेड हुँदैनथे ।
सन्तोष रानाम मगर
म यतिबेला अघि नै निन्द्रा देवीको शरणमा पुगिसकेको हुने थिएँ ।
दुनियाँको नौटंकी हेर्नु पर्दैनथ्यो ।
साप्ताहिक अझ बढी बिक्री हुन्थ्यो ।
राम्रो हुन्थ्यो ।
माछा मार्ने जाल त पक्कै हुन्थ्यो ।
एक–अर्कामा माया, प्रेम, सद्भाव तथा सम्मान रहन्थ्यो ।
हरेक प्रेम सम्बन्धहरू सुमधुर र सुरक्षित रहन्थे ।
खोइ, असामाजिक सञ्जाल हुन्थ्यो कि ?
यो पृथ्वी नै नभएको भए ? त्यसमै रमाउँथ्यौं होला । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल नभएको भए अर्कै रमाइलो हुन्थ्यो ।
द रेड् आईपी म्यान
आफन्तकहाँ आउजाउ हुन्थ्यो, भेटघाट हुन्थ्यो ।
साप्ताहिकको फेसबुक, ट्विटरमा यो पोस्ट हेर्न पाइँदैनथ्यो ।
विश्वव्यापी रूपमा आफ्ना भावना, अनुभूतिहरू आदानप्रदान गर्न सकिँदैनथ्यो ।
सबै जना स्वतन्त्र हुन्थे ।
केटाकेटीहरूको लभ पर्दैनथ्यो ।
यो पोस्ट पढ्न र जवाफ दिन पाइँदैनथ्यो ।
दामी हुन्थ्यो ।
प्रशान्त थेबे लिम्बू
तपाईंहरूको पत्रमित्रताको स्तम्भ अझै कायम रहन्थ्यो ।
मानिसहरू बिग्रने थिएनन् ।
मज्जाले चिठी लेखिन्थ्यो, हुलाकीको काम बढ्थ्यो ।
बिदेसिएका पुरुषहरूको पसिना खेर जाने थिएन र घर आउँदा श्रीमतीको मुस्कान देख्न पाइन्थ्यो ।
सुन्दर जीवनको परिकल्पना गर्दै हाँसीखुसी बाँचिरहेकी चेली बलात्कृत भएर यो संसार छोडेको, तीन महिना बितिसक्दा पनि उनको हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्न पुलिस, प्रशासन, सिंगो राज्य चुकेको, चाडपर्वमा उनका मातापिता मानसिक यातनामा बाँचेको जस्ता कुराको साक्षी हुनु पर्दैनथ्यो ।
पोस्टकार्ड लोप हुँदैनथ्यो ।
के हुनु सबै कुरा सरकारले चाहेजस्तो हुन्थ्यो, सोझासीधा जनता घुन पिसिए सरह पिसिन्थे अनि टाठाबाठा तथा फटाहाहरूको राज चल्थ्यो ।
उत्तर कोरियातिर बसेझैं हुन्थ्यो ।
सामाजिक सञ्जाल नभएको भए सामाजिक सन्जाल नै हुँदैनथ्यो ।
आजको जुन अवस्था छ, त्यो पक्कै सम्भव हुने थिएन । हामी अहिले कस्तो अवस्था छौं, त्यो भने आफै बुझ्नु होला ।
प्रकाशित :कार्तिक १२, २०७५
देवी घर्तिको आवाजमा मायालु बोले हुन्थ्यो
नयाँ वर्षमा कहाँ घुम्ने सोच छ? चैत्र २४, २०७५
जनमत–संग्रह सम्बन्धि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सशांक कोइरालाको अभिव्यक्ति कस्तो लाग्यो  ? चैत्र १६, २०७५
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्न गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो ? चैत्र १०, २०७५
तपाईंले कमाएको आम्दानी केमा सदुपयोग गरिरहनुभएको छ ? फाल्गुन २७, २०७५